Ukubuyekezwa kwe-XM Broker - Kumele Ufunde! Ingabe i-XM yiBroker Forex Broker?
Ikhaya Forex Broker Izibuyekezo Ukubuyekezwa kwe-XM Broker – Kumele Ufunde! Ingabe i-XM yiBroker Forex Broker?
2 Inkundla yokuhweba ye-XM
4 Ukushintsha kwe-XM
6 Indlela Yokukhokha Ye-XM
7 Bonus & Amaphromoshini
8 Izicelo Zeselula ze-XM
9 Okuhle Nokubi kwe-XM
10 Ukuphepha & Ukuphepha Kokusebenzisa i-XM
I-XM.com ingaphansi kwe-XM Group okuyiwebhusayithi yomthengisi oku-inthanethi nokuhweba eyasungulwa ngonyaka 2009. Isikhule yaba yifemu enkulu futhi ezinzile yokutshalwa kwezimali kwamazwe ngamazwe ene-over 2,500,000 amaklayenti nokubala namuhla. I-XM Group iyingxenye ye-Trading Point ye-Financial Instruments UK Limited, kanti umsamo ubulokhu uphekela abadayisi 196 amazwe ahlukene.
Inkampani inomoya onamandla wokuba nkulu, ukuba nobulungisa, kanye nomuntu. Inkampani ithi inensizakalo yamakhasimende ephezulu, indlela yomuntu siqu yawo wonke amaklayenti abo, noma yimuphi umgomo wokutshala izimali abanazo.
Inkundla yokuhweba ye-XM
Ngenkathi ungakhetha ku-spectrum ebanzi yamapulatifomu okuhweba, I-XM incoma ukusetshenziswa kwe-MetaTrader 4 kanye ne-MetaTrader 5. Izici eziyinhloko zale nkundla yokuhweba ukuthi isebenza nabeluleki abangochwepheshe, futhi iza nezinkomba ezakhelwe ngaphakathi nezingokwezifiso.
Okuyenza ihluke kwenye inkundla yokuhweba ukuhweba kwayo ngokuchofoza okukodwa. Iphinde iza nokuhlaziywa kobuchwepheshe okuphelele ngamathuluzi wokushadi nokuningi 50 izinkomba. Inzuzo engcono kakhulu yale nkundla yikhono layo lokuphatha inani elikhulu lama-oda. Iphinde ibe nokuphathwa kwesizindalwazi somlando kanye nokungenisa nokuthunyelwa kwedatha okungokomlando.
I-MT4/MT5 iyatholakala kuwo womabili amadivayisi we-Apple ne-Android, ukwenza kube isoftware ehamba phambili.
Amapulatifomu omthengisi we-XM avumela ukuhweba kwe-forex, yezimbiwa, amasheya, indices, ukulingana, izinsimbi, yigugu, imali ye-crypto, namandla.
Isilinganiso se-XM siphakathi 2:1 uku 30:1, kuye ngethuluzi. Ingashintsha ngokuhamba kwesikhathi, futhi i-XM inika amakhasimende ayo ithuba lokulawula ubungozi bawo obunamandla.
Imfuneko yemajini ihlala ilawula isonto lonke, futhi alilokothi libe banzi phakathi nempelasonto noma ebusuku. Abanye abahwebi ezimakethe okungezona ezaseYurophu bangafinyelela izinga eliphezulu lokusebenzisa amandla kanye nohwebo kuyilapho imikhawulo ethile ye-EEA ingasebenzi njengokuvikelwa kwebhalansi okungekuhle., Ngokwesibonelo. Kodwa qaphela ukuthi ukwanda kwesilinganiso kungakhulisa kokubili ukulahlekelwa kanye nenzuzo. Bonke abathengisi abangebona abaseYurophu bangabona ukushaya okunamandla 500:1 ezimakethe ezithile.
I-XM ihlinzeka ngokusabalalisa okuqinile kuwo wonke amakhasimende ayo ngokunganaki ukuthi yiziphi izinhlobo ze-akhawunti namasayizi okuhweba anawo. Ukusabalala kuyahlukahluka kuye ngohlobo lwe-akhawunti evulwe njenge-Akhawunti Encane, I-akhawunti ye-XM Zero, kanye ne-Akhawunti Ejwayelekile. Kuwo wonke uhlobo lwe-akhawunti, ukusabalala aphansi kuyinto 0.1 amapipi. Ngokwesinye isandla, ukusabalala okumaphakathi okuhloselwe ipheya enkulu efana ne-EUR/USD ifinyelela 0.1 amapipi.
Enye yezinto ezinhle kakhulu nge-XM ukuthi isebenza ngokuqinile ngaphandle kwezimali ezifihliwe noma inqubomgomo yekhomishini. Kungenxa yokuthi ama-akhawunti we-XM Zero kuphela anikezwa ikhomishini. I-XM iphinde ifake zonke izinkokhelo zokudlulisa kanye nokuhoxiswa okuqinisekile kosuku olufanayo.
Indlela Yokukhokha Ye-XM
Ukulandela imithetho ye-KYC yamanje, bonke abadayisi be-XM badinga ukuthumela ikhophi enombala kamazisi osemthethweni noma umazisi njengelayisensi yokushayela noma ipasipoti. I-XM iphinde idinga umthethosivivinywa wezinsiza wakamuva obhalwe phakathi nezinyanga ezintathu ezedlule njengobufakazi bekheli lomhwebi.. Ngemva kwalokho, umhwebi angaqala ukwenza idiphozithi encane ye $5 kuma-Akhawunti Ajwayelekile kanye Nama-Micro kanye $100 kuma-akhawunti angu-Zero.
Abahwebi bangafaka imali besebenzisa amakhadi esikweletu ayisisekelo, ukudluliselwa kwebhange lendawo, izindlela zokukhokha ngogesi, nokudluliswa kwezintambo, phakathi kwabanye. Idiphozithi ingenziwa kusetshenziswa noma iyiphi imali uma kubhekwa ukuthi izoguqulelwa ngokuzenzakalelayo ohlotsheni lwemali olukhethile njengoluzenzakalelayo lapho uvula i-akhawunti yakho.. Ngaphezu kwalokho, konke ukuhoxiswa kwemali kucutshungulwa ngaphakathi 24 amahora, futhi i-XM ngeke ikukhokhise ngokukhipha imali ku-eWallet yakho.
Okunye okunikezwayo okuhle kakhulu kwabathengi be-Forex amabhonasi nokukhushulwa. I-XM ihlinzeka ngezinyuso ezimbalwa ezifaka a $30 ibhonasi yokuhweba evumela abathengisi ukuthi bahlole ikhwalithi yokubulawa kwe-XM ngaphambi kokuhweba okwangempela. Umthengisi uphinde anikele 50% idiphozi ibhonasi engafinyelela ku $500 kanjalo a 20% idiphozi ibhonasi mayelana $4.500.
Kusukela ngenyanga kaSepthemba kuya kuZibandlela, I-XM iphinde ihlinzeke nge-BER MONTHS iphromoshini engafaka phakathi ukuhweba ukuze uwine uhambo lwababili, ukuya endaweni yesithombe ephelele njengeCebu, Philippines. Ngaphandle kwalokho, I-XM iphinde ibe nohlelo lwayo lokwethembeka lwe-XM lapho imicimbi ethile nemicimbi imakelwa amabhonasi esizini akhethekile kanye namabhonasi akhethekile atholakala kuphela kulabo abamenyiwe ukubamba iqhaza..
I-XM iphinde inikeze i-VPS yamahhala noma iseva yangasese ebonakalayo kumakhasimende ayo ukwenza ukuhweba kwawo kusheshe. Abahwebi bangafinyelela i-VPS noma nini nanoma kuphi futhi isevisi ithi izoqeda isikhathi sokuphumula. I-XM iphinde inikeze ukuhoxiswa kwamahhala, amadiphozithi, kanye nekhomishini yawo wonke amakhasimende ayo.
Izicelo Zeselula ze-XM
I-XM iza nezinguqulo ze-Apple ne-Android, ongayisebenzisela i-iPhone, I-iPad, Amathebulethi e-Android, kanye namafoni e-Android. Uhlelo lokusebenza lweselula lwe-XM lutholakala ku-App Store naku-Google Play Store. Uhlelo lokusebenza lweselula lwe-XM lusebenza ngokugcwele, okuvumela abahwebi ukuthi baqaphe futhi bahwebe ngisho besendleleni. Amapulatifomu edeskithophu ayatholakala futhi kufaka phakathi i-Mac ne-PC ngesici sokuhweba sokuchofoza okukodwa.
Okuhle Nokubi kwe-XM
Izinzuzo ezinhle kakhulu ze-XM yizindleko zayo eziphansi zokuhweba. Iphinde ibe nesici semali engahoxisi, ukuvumela abadayisi ukuthi bagcine imali yabo. Ukungalungi kwe-XM, Ngokwesinye isandla, yimali ebekiwe yokungasebenzi. Izinhlobo zayo ezihlukene zama-akhawunti nazo azinakho ukwehluka okuwenza acishe afane.
Ukuphepha & Ukuphepha Kokusebenzisa i-XM
Uma kukhulunywa ngezokuphepha, I-XM inesendlalelo esithile sokuvikela abadayisi bayo. Idinga abasebenzisi ukuthi baqinisekise ikheli labo le-imeyili ukuze bavule i-akhawunti yedemo. Okokuvula i-akhawunti yokuhweba, umsebenzisi udinga ukwethula imibhalo kamazisi ukuze aqhubeke. Iwebhusayithi futhi ingaphansi kokuvikelwa kwenqubomgomo yobumfihlo yenkampani, okusho ukuthi yonke idatha yomuntu siqu yabasebenzisi ihlezi iphephile futhi ivikelekile.
Abahwebi abavela eThailand, Australia, Iningizimu Afrika, i-United Kingdom, Singapore, I-India, i-Hong Kong, eNorway, France, Germany, eSweden, I-Denmark, Italy, I-Saudi Arabia, I-United Arab Emirates, Qatar, E-Luxembourg, I-Kuwait, futhi amanye amazwe amaningi avunyelwe ukujoyina i-XM. Amazwe afana neCanada, I-united states, EBelgium, Israyeli, futhi i-Iran ikhululiwe.
Kubo bonke abahwebi nabafuna ukuhwebelana, I-XM yindawo efanele yokuqala. Inikeza insizakalo yomthengisi ephelele kuwo wonke amazinga abahwebi. Naphezu kokuntuleka kwayo kokuhlukahluka ezinhlotsheni ze-akhawunti yayo, ukusetshenziswa kwayo kalula nezinye izinzuzo kunganelisa izidingo zakho zokuhweba.
Isiqephu esedluleIchimoku Cloud Forex Trading Strategy
Isihloko esilandelayoUkubuyekezwa kwe-FXOpen Broker – Kumele Ufunde! Ingabe i-FXOpen i-Safe Forex Broker